China Yakanyanya Mutengo Yakaderera Voltage switchgear GCS Yakadzika Voltage Drainage switchgear Mutengesi-shengte MOQ 1pcs vagadziri uye vanotengesa | Shengte
Yakanyanya Mutengo Yakaderera Voltage switchgear GCS Yakadzika Voltage Drainage switchgear Mutengesi-shengte MOQ 1pcs
GCS yakaderera-voltage yekuwedzera switchgear inokodzera kushandurwa kwesimba, kugoverwa uye kudzora kwema low-voltage kugovera masystem senge magetsi emagetsi, masisitendi, petrochemical madhipatimendi, mafekitori, emabhizimusi emigodhi, mahotera uye zvivakwa zvepamusoro-soro, magetsi ekuparadzira uye emagetsi ekudzora nzvimbo, capacitance muripo, nezvimwe.
Inogona kusangana nezvinodiwa zvakakosha zvemakomputa interface mune simba rekushandisa zviitiko senge magetsi ekudyara ane hombe imwechete simba, yakaderera-magetsi magetsi ekudzora nzvimbo uye mota dzekudzora nzvimbo mune makuru peturu chemabhizimusi maindasitiri.
Iyo chishandiso idiki nyowani-yemagetsi kuburitsa switch kabhiti yakagadzirirwa pane musimboti wekuchengetedza, hupfumi, kunzwisisa uye kuvimbika, zvinoenderana nezvinodiwa nevatariri, vashandisi nedhipatimendi dhizaini reBazi reMagetsi, kuitira kuzadzisa zvido zve kugona kuwedzera, komputa interface, masimba epakati, simba rekuchengetedza uye kupfupisa nguva yekubata tsaona mumusika wemagetsi uri kusimukira. Chigadzirwa chine hunhu hwekutyora, hukuru hwekubatanidza kugona, kugona kwakanaka uye kupisa, kupisa kwemagetsi, kusanganisa kwakanaka, nhevedzano, kugona kwakasimba, chimiro cheinovhuru uye giredhi rakakwirira rekudzivirira. Inogona kushandiswa sechigadzirwa chinotsiva chakaderera-voltage yekuwedzera switchgear.
A. Iyo cabinet ine simba rakanaka uye kuomarara. GCS kabhodhi inoshandisa 8MF simbi. Ukobvu hwayo, zvinhu uye chimiro chemuchinjikwa-chikamu nzvimbo yakakura kwazvo kupfuura imwe kabhoni simbi, saka simba nekuomarara kwe8MF simbi zviri nani.
B. Pfupi-yenguva inomira yazvino yeiyo yakatwasuka bhazi uye yakamira bhazi inosvika 80 kA / 1S, uye yepamusoro inomiririra yazvino inosvika 176 kA / 0.1, iri pamusoro kupfuura imwe switchgear.
C. switch iyo yakasarudzwa naC.
PC PC kabati inogona kuve yakagadzirirwa matatu switch kusvika ku1600A, iyo inogona kudzikisa nzvimbo inogarwa uye mutengo wekuvaka. MCC kabhodhi inogona kuve nematanhatu mashanu akasiyana anoshanda mayunitsi (0.5, 1, 1.5, 2, 3 mayuniti). (Chiumbwa chechikamu chinogona kuve chakakamurwa kuva rudzi rweyakajairwa uye mhando yehupfumi yevashandisi kusarudza.) Kudhonza-mukati, kudhonza-kunze uye kudzima-kwamadhirowa zvese zvinoonekwa nemubato mumwe chete weiyo inoshanda sisitimu. Nekuti iyo yakatwasuka bhazi kabati yakaiswa yakati sandara kuseri kwayo, ese ari maviri epamusoro uye ezasi tambo dzine nzira dzekupinda, izvo zvinopedza dambudziko rekuti zvigadzirwa zvekare hazvigone kuiswa kana kunze kwekabineti. Izvo zvemagetsi zvinongedzo uye zvishongedzo zvakaiswa mukabati zvinogadzirwa nemugadziri uye zvine yakakwana mhando vimbiso sisitimu.
Chigadzirwa ichi chinoenderana neIEC439-1 "Low-voltage switchgear nemidziyo yekudzora", GB7251.1 "Low-voltage switchgear nemidziyo yekudzora", ZBK36001 "Low-voltage inobviswa switchgear" uye mamwe maitiro.
A. Kabineti simba uye kuomarara. GCS kabhoni inoshandisa 8MF simbi, yayo jira zvinhu zvakakora, zvinhu uye chimiro chikamu chikamu nzvimbo zvinoshandiswa kupfuura imwe areka mhando yesimbi modhi yakakura kwazvo.Naizvozvo, simba uye kuomarara kweiyo 8MF simbi zviri nani zvikuru.
B. Iyo pfupi-yenguva inomira yazvino yeiyo yakatwasuka busbar uye iyo yakatwasuka busbar inosvika 80kA / 1S, uye iyo yepamusoro inomira yazvino inosvika 176kA / 0.1, iri pamusoro kupfuura mamwe switchgear makabati.
C. GCS kabhodhi inogona kuve yakagadzirirwa akasiyana wedunhu mabhureki anogadzirwa kumba nekune dzimwe nyika zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
D. PC kabati inogona kuve nematanhatu matatu 1600A uye pazasi maswitch ekuderedza pasi nzvimbo uye kudzikisa kuvaka mutengo. Iyo MCC kabati inogona kuve inoumbwa neshanu dzakasiyana dzakasiyana dzinoshanda zvikamu zve0,5, 1, 1.5, 2, uye 3 mayuniti (iyo yuniti dhizaini yakakamurwa kuita yakajairwa mhando uye yehupfumi mhando kune vashandisi kusarudza). Iko kusundidzira-mukati, kudhonza-uye kudzima-dhirowa kunoonekwa nemubato weiyo inoshanda sisitimu. Sezvo iyo yakatwasuka busbar kabati yakaiswa yakati sandara, iyo tambo yekamuri ine mapindiro ekuwana kumusoro uye pasi, izvo zvinopedza dambudziko rekuti zvigadzirwa zvekare hazvigone kuburitswa. Izvo zvemagetsi zvinongedzo uye zvishongedzo zvakaiswa mukabati zvinogadzirwa nemugadziri uye zvine yakakwana mhando vimbiso sisitimu.
Rated frequency Hz 50 （60）
Rated ikozvino A Horizontal bhazi bhawa 000 4000
Vertical bhazi bhawa 1000
Bhazi rakatemwa pfupi-pfupi kumira kwazvino kA (1S) 50-80
Bhazi rakatarwa nenhamba inomira yazvino kA (0.1S) 105-176
Rated kuputira voltage V Matatu-chikamu mana-waya system 660 （1000）
Bhazi system Matatu-chikamu shanu-waya system A 、 B 、 C EN PEN
Simba Frequency Bvunzo Voltage V (1min) main dunhu V A B, V V, PE 、 N
Yekubatsira Dunhu Remazita Voltage V Dunhu rekubatsira 2500
main dunhu 1760
Chikamu chekudzivirira -220、380
Kunze kwehupamhi hupamhi x kudzika x kukwirira -110、220
Ongorora: Chiyero chechigadzirwa uye huremu idhata kune imwe nguva yenguva uye inogona kuchinja nekuda kwekuvandudza dhizaini
Pashure: Fekitori Mutengo GGD AC Yakaderera Voltage Distribution Kabineti Mutengesi-shengte
Zvadaro: Yepamusoro Yemhando Yemagetsi Magetsi Yakagadziriswa Substation Mudziyo Substation Wholesale-shengte